नेपाल आज | कति देशका नागरिकले लिएका छन् श्रम इजाजत?
कति देशका नागरिकले लिएका छन् श्रम इजाजत?
काठमाडाैँ – श्रम तथा व्यवसायजन्य विभागबाट बिहीबार मात्रै ११ जना विदेशी नागरिकले श्रम इजाजत लिएका छन् ।
श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमातहतको श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागले रोजगारीका लागि नेपालमा आएका विदेशी श्रमिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गर्दै आएको छ ।
विभागले साताको दुई दिन सोमबार र बिहीबार श्रम स्वीकृति दिने गरिरहेको छ । श्रम विभागले आर्थिक वर्ष २०६९/७० देखि विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत दिन थालेको हो । आव २०६९/०७० मा ९ सय ८४ विदेशीलाई विभागले श्रम इजाजत दिएको थियो ।
यस्तै, आव २०७०/०७१ मा ७ सय १९, आव २०७१/०७२ मा २ हजार १९, आव २०७२/०७३ मा १ हजार ४ सय ७२ विदेशी नागरिकलाई श्रम इजाजत प्रदान गरिएको विभागले जनाएको छ ।
यसैगरी, आव २०७३/०७४ मा १ हजार ३ सय २४ नयाँ श्रम इजाजत जारी गरेको विभागले सोही आवमा ६ सय ४८ श्रम इजाजत नवीकरण गरेको थियो ।
आव २०७४/०७५ मा १ हजार ६ सय ८ नयाँ श्रम इजाजत र ९ सय ६२ नवीकरण तथा आव २०७५/०७६ मा १ हजार १ सय १९ नयाँ श्रम इजाजत र ८ सय ६२ श्रम इजाजत नवीकरण गरेको थियो ।
चालू आवको पाँच महिनाको अवधिमा विभागले ५ सय ४० विदेशी नागरिकलाई नयाँ श्रम इजाजत प्रदान गरेको छ भने सोही अवधिमा ५ सय ३७ श्रम इजाजत नवीकरण गरेको छ ।
श्रम इजाजत लिनेमा सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन् । चीन सरकारको सहयोगमा सञ्चालित परियोजनामा ठूलो संख्यामा चिनियाँ नागरिकले काम गर्दै आएका छन् ।
त्यस्तै, नेपालमा काम गर्ने भारतीय नागरिकको संख्या पनि निकै ठूलो छ । यद्यपि सबै भारतीय नागरिकलाई श्रम इजाजतको आवश्यकता पर्दैन तापनि दक्ष कामदारका रुपमा नेपालमा काम गर्दै आएका केही भारतीय नागरिकले भने श्रम इजाजत लिएका छन् ।
श्रम इजाजत लिनेमा नेपाललाई आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता प्रदान गर्दै आएका मुलुकका नागरिकको संख्या उल्लेख छ । केही दातृ निकायमा काम गर्ने विदेशी नागरिकले पनि श्रम इजाजत लिएका विभागले जनाएको छ ।
अस्ट्रेलिया, बंगलादेश, भुटान, क्यानडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान, दक्षिण कोरिया, मलेसिया, मेक्सिको, पाकिस्तान, साइबेरिया, स्पेन, श्रीलङ्का, स्वीडेन, स्वीट्जरल्याण्ड, थाइल्याण्ड, बेलायत, अमेरिकालगायत ८७ मुलुकका नागरिकले श्रम इजाजत लिएर नेपालमा काम गरेको विभागको तथ्यांकमा उल्लेख छ ।
ऐनमा कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताअन्तर्गत श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने अवस्थामा बाहेक नेपालमा काम गर्ने सबै विदेशी नागरिकले श्रम स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था छ । रासस